Kune zvakawanda zvekugovera vanotora kunze uko kuti vasarudze kubva, asi hazvisi un nou kuwana imwe inewgu yakareba kupfuura yeRose Hosting. Yakatangwa mu2001, uyu mupi wekugovera ari muSt. Louis Missouri muUnited States umo inoshandisawo nzvimbo yake yedhesi. Iyo kambani inotaura kuti RoseHosting.com ndiyo yekutanga uye yega webhupu yekuchengetera kambani munyika kuti ipe vashandisi vashandisi veLinux kumashure zvakare mu 2001 (pasi PeRose Web Services LLC) uye inokurudzira vatengi vayo kuti chengetedza chokwadi.
2 Historial d’història en negocis d’allotjament
5 RoseHosting Descomptes uye Dzidza Zvimwe
5.1 Descompte especial de RoseHosting
5.2 RoseHosting Horari
Ndapedza makore anopfuura 20 mukugadzira software de gestió d’allotjament web.
Ndakagadzira Rose Web Services LLC mu2001 nechinangwa chokuita kambani yangu itsva ndiyo yekupedzisira inopa vashandi-vane ushamwari, vakatendeseka, vakachengetedzwa zvakakwana kweLuxux VPS kubata mauto. Ndinodada kutaura kuti makore anopfuura gumi gare gare isu tiri kubudirira pabasa reduce uye ini ndichiri muridzi uye CEO, sevvandave ndiri kubva kune rimwe zuva.
Historial d’història en negocis d’allotjament
Padanho rekutanga, Rose Hosting, Missouri-yakavakirwa LLC iyo yandakatanga kumashure mu2001. RoseHosting.com ndiyo yakanyanya mhando uye yakakurumidza kuve mutungamiri muLinux VPS yekubata nzvimbo. Zvimwe zvedu zvimwe zvigadzirwa zvinosanganisira linuxcloudvps.com uye virtual-server.org, kunyange paine vamwe. RoseHosting.com inokwenayo nese midziyo yayo – que és pamusoro petambo – panzvimbo yedu yedhorobha mudhorobha St. Louis, Isingasviki amb 50 mamaira kubva kunharaunda yeUnited States.
Chii chakafanana nebhizimisi raRoseHosting? Tinogona aquí kuva nemafuta anonyanyisa panell nhamba yemadzimai kambani ikozvino inobata; uye hukuru hwekambani?
Nhamba yevashandi vakagadziriswa nevadzidzisi vanogara vachifamba, asi ikozvino kune 40. Pane imwe nhamba iyo iyo nhamba yeboka re Linux gurus rine ruzivo rwakakura runopa 24/7 kutsigire junt vatengi vedu.
Tichitarisa kupfuura boka reduc remukati, ini handizivi chaizvo kuti mazita emasipirini edu emaoko edu anogadzirisa sei – sezvo ari oga, kunyange tisingagoni kuwana vazhinji vavo. Izvozvo zvakati, zvichibva pane zvatinonzwa kubva kune vatengi vedu, dominis vamwe vevatengi vedu vanoita mazana emadunhu – asi vamwe vasingatongedzi mazita zvachose paVPS yavo. Tinoziva kuti takashumira maService e-300.000 Linux Chaiwo Kusvika nhasi, kusanganisira vatengi vekare uye vekare.
Sei ndichifanira kuisa nzvimbo dzangu paRoseHosting? Ndinoreva – chiiita chutiita kuti ive nani panell vamwe?
Yedu 24/7 EPIC Centre de suport tècnic basat als Estats Units inoshandiswa ne Linux gurus vanoziva hurongwa uye tecnologiesia mune nekze. Vatengi vedu vanotitaurira kuti huwandu hweshumiro yatinopa hahuna kumboitika uye kuti, apo pavakatanga kutenga kutenga kubata, vainge vaine nguva yakaoma vachidavira kuti inogona kuiswa muzvirongwa zvedu zvebasa pasina mari yakawedzerwa. Ichokwadi chaizvo-iwe unofanirwa kuzviwana kuti unzwisise kana kuti uchitenda.
Bhobi, ndinoda kutaura zvishoma pamusoro pekutarisira mutemo. Pamwe aquest handifungi kutarisa kuipa kwakaipa; iyo inokonzera vatengi vakawanda vasina mufaro munguva refu. Em sembla unofungei mune izvi?
Zvakanaka. Tibatsirei kusarudza pakati peSDD (unitats d’estat sòlid) uye kugara kweVPS kubasa. Mune maonero ako, ndeapi nzvimbo dzekushandisa dzinofanira kushandisa shanduro dzako dzeSDD VPS?
Preu VPS RoseHosting (juliol de 2014)
RoseHosting Descomptes uye Dzidza Zvimwe
Zvakanaka ndizvo zvese zvebvunzurudzo yangu. Kana uchida kudzidza zvakawanda nezvaRose – Heino yangu wongororo kuongorora. Zvimwe, unogona kushanyira RoseHosting en línia http://www.rosehosting.com web kana kutevera panell amfitrió Twitter uye Facebook.
Descompte especial de RoseHosting
Rosa Bhalisa uchishandisa kadhi yepurogiramu WHSR uye kugamuchira 25% kuburitswa pazvakagoverwa uye zveVPS kuronga zvirongwa zvehupenyu (Verenga! Kwete kwete kwekutanga yako – asi nokusingaperi).
Ndanga ndiri kutevera RoseHosting uptime kubva munaNovembre 2013 Kushandisa Uptime Robot. Kuputira, heyi maviri mapikicha emazuva ano zvandine. I
RoseHosting 30 days Uptime (agost 2014)
Puntuació d’aptitud de Rose Kubata (març – abril de 2014): 99,97%